LALAM-PIRENENA FAHAROA : Hampihena ny tsy fandriampahalemana ny fijoroan’ny BRS – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:55
Antananarivo, MGA -3	℃
Ny fotodrafitrasa BRS eo Sahamamy, an'ny Zandarimaria.
Accueil/Fanadihadiana Manokana/LALAM-PIRENENA FAHAROA : Hampihena ny tsy fandriampahalemana ny fijoroan’ny BRS
LALAM-PIRENENA FAHAROA : Hampihena ny tsy fandriampahalemana ny fijoroan’ny BRS
Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy omaly, ny "Brigade routière Spéciale" na BRS ao Sahamamy, Kaominina Ranomafana, distrikan'i Brickaville, anatin'ny Faritra Atsinanana. Lohalaharana amin'ny veliranon'ny Filoham-pirenena ny fandriampahalemana. Tafiditra ao ny fahalemana amin'ny lalam-pirenena, izay hisian'ny fanakanan-dalana matetika. Hitondra vahaolana sy hampihena ny tsy fandriampahalemana amin'ny lalam-pirenena ny fahavitan'ny fotodrafitrasa lehibe BRS. Fanadihadiana...
Rado Harivelo 4 septembre 2020
58 4 minutes de lecture
Lasa mialoha ny fahavitan’ny fotodrafitrasa BRS.
Velirano voalohan’ny Filoham-pirenena, Rajoelina Andry ny fametrahana ny fandriampahalemana maharitra eto amin’ny tany sy ny Firenena. Ankoatra ny ady amin’ny dahalo sy ny mpaka an-keriny ireo teratany vahiny sy teratany malagasy, isan’ireo ady tanterahin’ny Fanjakana koa ny ady amin’ny fanakanan-dalana eny amin’ny lalam-pirenena. Ho an’ny lalam-pirenena faharoa, isan’ireo mampikolay ny mpandeha ny fisiana fanakanan-dalana sy fiakaran’ireo olon-dratsy eny ambony taksiborosy, indrindra amin’ny alina. Ho an’ny teo anivon’ny Zandarimariam-pirenena, tontosa soa aman-tsara ny fotodrafitrasa “Brigade routière spéciale” na BRS, ao amin’ny tanànan’i Sahamamy, Kaominina Ranomafana, Distrikan’i Brickaville, Faritra Atsinanana. Nambaran’ny ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny Jly Ravalomanana Richard fa
« mitentina 300 tapitrisa Ar ity fotodrafitrasa najoro ity. Mbola tsy ny « Toeram-pialan-tsasatra voarindra sy voaaro » iray manontolo no notokanana fa ny ampahany ihany no nosokafana. Misy minisitera telo mbola miaraka amin’ny fanatanterahana ny fotodrafitrasa, isan’izany ny minisiteran’ny Fitaterana, ny Fahasalamana, ary ny Angovo. Ny an’ny Zandarimariam-pirenena no efa vita ny fotodrafitrasa ka dia nosokafana satria efa vonona avokoa ny fitaovana sy ny olona hiasa ».
Raha ny fanazavana, efa vonona ny “camera” mpanara-maso, ny olona hiasa, ny basy sy ny fitaovana maro hafa. Ho an’ny lalam-pirenena faharoa (RN2), ny eo Sahamamy, fa ho an’ny lalam-pirenena fahafito kosa, eo Ambalamanakana (RN7), ary Analankinina Miandrivazo (RN34), izay efa vita koa ny fotodrafitrasa. Hiasa avy hatrany ity fotodrafitrasa nosokafana ity satria mila fandriampahalemana ny arabe. Azo ambara fa toky sahady ho an’ireo andeha ho any amin’ny Faritra Atsinanana iny izany. Mbola ny mankany Toamasina rahateo no mahazo miasa ny taksiborosy amin’ny lalam-pirenena. Nambaran’ny Seg hatrany fa nahavita zavatra maro ny Fitondram-panjakana mijoro na dia vao herintaona mahery aza no nijoro. Isan’ireny ny EPP manara-penitra, ny lalana, sy ny maro hafa.
Ny Seg Jly Ravalomanana Richard nanokatra amin’ny fomba ofisialy ny BRS.
Ny hampandroso an’i Madagasikara no tadiavintsika ary ny hampiadana azy ao anatin’ny Fandriampahalemana. Niantso fifanomezan-tanana ny Seg amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.
Hentitra ny Kaomandin’ny Zandarimariam-pirenena, ny Jly Andrianjanaka Njatoarisoa fa « mijoro eto Sahamamy ny BRS, izay Veliranon’ny Filoham-pirenena. Matetika nisehoana fanafihana iny lalam-pirenena faharoa iny, indrindra amin’iny Kaominina Ranomafana, izay lalana be miolankolana ». Isan’ny antony nampijoroana ireo fotodrafitrasa goavana eo. Niantso fifanomezan-tanana izy momba ny fandriampahalemana amin’ny fanakanan-dalana. Nasongadiny fa misy alika mpitsongo dia eo anivon’ny BRS. Nampitandrina ireo mpanafika fiara izay tsy aiza fa eo anivon’ny fiarahamonina izy. Fiaraha-mientana amin’ny ray aman-dreny niteraka no atao satria misy miray tsikombakomba amin’ireo olon-dratsy. Manao antso avo hifanome tanana amin’ny vahoaka ny Zandary. « Lazao aminay ireo olona tsy manjary, mba hitondrana fandriampahalemana ity Faritra ity », raha ny fanampim-panazavana.
Ireo vovonana iadian’ny lohany eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena.
Ny Luet Sylvain no hiandraikitra ity Toby BRS eo Sahamamy, anatin’ny distrikan’i Brickaville ity. Nomena tamin’ireo vahoaka nanatrika ny laharana finday, mba hahafahan’ny vahoaka mitoroka ireo olon-dratsy. Tanjona ny hanafoana ny fanakanan-dalana, sy ny tsy fandriampahalemana. Nohazavaina fa ny fahasalamana no voalohan-karena, raha ny Fandriampahalemana no iankinan’ny fampandrosoana. Nanterina fa hahazo tombony ny vahoaka, rehefa mitoetra ny fiaraha-miasa amin’ny vahoaka. Manome vaovao, araka izany, no andrasan’ny mpitandro filaminana amin’ny vahoaka. Nampitaina tamin’ny vahoaka fa tsy ananan-kavana ny fandriampahalemana. Andraisana fepetra ireo mihoa-pefy. Tafiditra ao anatin’izany ny eo anivon’ny Zandarimaria. Tamin’ny taona 2019, zandary miisa 126 nalefa teny amin’ny Fitsarana ka ny 84 nidoboka am-ponja. Ho an’ny taona 2020, 31 no efa no efa nigadra, raha 65 nalefa teny amin’ny Fitsarana. Midika izany fa tsy ekena ny firaisana tsikombakomba amin’ny olon-dratsy ary tsy anavahana na iza na iza.
Vonona amin’ny fanenjehana mpanakan-dalana ireto môtô ireto.
Ahitana fotodrafitrasa maro ny « Toeram-pialan-tsasatra voarindra sy voaaro » eo Sahamamy anatin’ny Kaominina Ranomafana, distrikan’i Brickaville andraisana ireo mpandeha mivezivezy amin’ny lalam-pirenena faharoa iny. Afaka volana vitsivitsy, hisy ny fitokanana ny fotodrafitrasa rehetra, izay ny Filoham-pirenena no hanatontosa izany. Ny fandriampahalemana tsy afaka miandry ka antony nahatonga ny BRS hiasa avy hatrany. Ho an’ity fotodrafitrasa ity, ahitana toeram-piasana ho an’ireo zandary hiasa ao. Misy efitra 11, izay misy ny toeram-pandraisana olona, ny toerana mifehy ny Toby. Ahitana efitra fanaovana famotorana. Manana fitaovana arifomba ny BRS, toy ny « camera » ijerena ny fiara mandalo amin’ny RN-2 rehetra. Ny mampiavaka azy, ny hahitany ny laharana fiara rehetra. Hita ao an-toerana koa ny toeram-pamonjana vonjimaika, itazonana ireo nanao heloka. Manaja ny fenitra ny toeram-pamonjana satria manaja ny zon’olombelona. Efa misy toeram-pivoahana ao anatiny….
Hitondra fampandrosoana ho an’ny Firenena
Ampahany amin’ny fotodrafitrasa ao Sahamamy Brickaville.
Lalandra ho an’ny toekarena ny lalana. Olana mateti-piseho ho an’ny lalam-pirenena ny resaka tsy fandriampahalemana. Ho an’ny lalam-pirenena faharoa (RN2), tao Sahamamy no nametrahan’ny Fitondram-panjakana ny « Toeram-pialan-tsasatra voarindra sy voaaro ». Nambaran’ny ben’ny Tanànan’Andranomafana Ravelonasy Barthélemy Samuel fa « tafiditra ao anatin’ny vinan’ny Filoha izao fotodrafitrasa, mba hamerenana indray ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Ny lalam-pirenena faharoa dia lalandra mankany amin’ny havokavok’i Madagasikara, izay mitondra ny zavatra rehetra na entana avy any ivelany na entana avy any Antananarivo ho any ivelany. Tombony ho anay ny fisian’ny fotodrafitrasa mijoro satria mitondra fampandrosoana ho anay ».
Ny ben’ny Tanànan’ny Kaominina Ranomafana misy ny fotodrafitrasa.
Noho ny fisian’io fotodrafitrasa io, marobe ny asa hiforona ary afaka mivarotra ny vokatry ny tany ho an’ny mpandeha miala sasatra eo ireo vahoaka eny ifotony. Nasongadin’ny ben’ny Tanàna fa vonona izy ireo ny hiara-kiasa amin’ny mpitandro filaminana sy ny Fanjakana foibe, ary nanome fanamby teo anatrehan’ny vahoaka ny amin’ny fisiana fifanomezan-tanana hisian’ny fandriampahalemana maharitra amin’ny lalam-pirenena faharoa, indrindra ny ao amin’ny Kaominina Ranomafana. Azo lazaina fa hanampy tanteraka ny Borigadin’ny Zandarimariam-pirenena ào an-toerana ny fahatongavan’ny BRS ao Sahamamy. Ankoatra ny BRS tonga dia miasa hitandro ny fandriampahalemana ho an’ny vahoaka, efa an-dalam-pahavitana ireo fotodrafitrasa hafa toy ny toeram-pisakafoana, toerana hakana aina, sy hividianana voandalana. Raha ny hita teny an-toerana, manara-penitra ny asa ary mbola ao anatin’ny fanamboarana tanteraka ankehitriny.
Isan’ireo tomponandraikitra ambony nandalo teny amin’ity fotodrafitrasa ity ny minisitry ny Fitaterana, Fizahantany ary Famantarana ny toetrandro, Joël Randriamandranto, nihaino ny hetahetan’ireo ben’ny Tanàna ao anatin’ny distrikan’i Brickaville sy ny fivoaran’ ny asa eo Sahamamy, izay misy ny « Toeram-pialan-tsasatra voarindra sy voaaro ». « Ny dingana voalohany izay no vita tamin’ity fotodrafitrasa ity, fa hiditra amin’ny dingana faharoa isika, dia ny fanaovana ny toeram-piantsonan’ny fiara. Eo koa ny fametrahana ny jiro sy ny rano eto amin’ity toerana ity. Izany tetikasa izany dia volavolaina ao anatin’ny iray volana sy tapany hatramin’ny roa volana eo », hoy hatrany ny minisitra. Tanjona ny hahazoan’ny mpandeha amin’ny lalam-pirenena faharoa, mba miala sasatra kely eto amin’ity toerana ity. Ho fitsinjovana ny filaminam-bahoaka ihany koa no antony nisian’ny BRS izay andraisana andraikitra avy amin’ny Zandarimariam-pirenena.
Ny minisitry ny Fitaterana nifampitafa tamin’ireo ben’ny Tanàna eo anivon’ny Distrikan’i Brickaville.
Rehefa milamina tsara, araka izany, ny lalam-pirenena, dia azo antoka ny fandriampahalemana. Mazava ho azy ny hisokafan’ny fizahantany any amin’ny Faritra Atsinanana iny. Iray amin’ireny ny Lakandranon’ I Pangalanina, izay tafiditra tanteraka ao anatin’ny veliranon’ny Filoham-pirenena, ny hanokafana iny lakandrano iny miainga ào Toamasina ka mipaka hatrany Farafangana. Nasongadin’ny minisitra hatrany fa efa azo ivezivezena iny lakandranon’ny Pangalanina miainga ao Toamasina ka hatrany Mananjary. « Ny 10%-n’ny asa sisa no mbola tsy vita amin’ny asa amin’ny lakandranon’ny Pangalanina, mba hampalalaka ny fivezivezena amin’iny Lakandrano iny », hoy izy nanazava. Hitondra fampandrosoana ho an’ny Faritra Atsinanana ny fanatanterahana fotodrafitrasa maro. Azo antoka fa hitondra fampandrosoana ho an’ny Firenena ny fandraisana andraikitry ny minisitera isan-tokony.
Tsy nohadinoin’ny Zandarimaria ireo Tangalamena ao an-toerana.
Brickaville BRS fandriampahalemana Zandarimaria
FREEDOM: Nanavao ny birao nasionaliny ny Antoko
TSY FITANDREMANA SY OLANA ARA-TEKNIKA Maromaro ny lozam-pifamoivoizana niseho tato ho ato
RAHARAHA APOLLO 21: Voasazy 20 taona sy 10 taona asa an-terivozona i Paul Rafanoharana sy François Marc Philippe
FAMPIROBOROBOANA NY KOLONTSAINA: Politikam-pirenen’ny Kolontsaina, Satan’ny mpanakanto, tranoben’ny serasera sy kolontsaina, ANAC… tsy ho ela
PAIKADY FANARENANA NY ORINASA JIRAMA : Irosoana ny famongorana ireo mpampiasa herinaratra tsy ara-dalàna